Imala Kafaa MM Abiy Ahimad : 'Naannoo ta'uun furtuu waan hundaa miti' - BBC News Afaan Oromoo
Dilbata ganama gara magaala Boongaatti kan imalan Ministirri Mummee Abiy Ahimad(PhD) isteediyeemii magaalaa Boongaatti erga simatamanii booda galma walgahii magaalichaatti bakka bu'oota uummataa walin mari'ataniiru.
Gaaffiiwwan ministira mummeef dhiyaatan keessaa tokko gaaffii naannoo ta'uu uummatichi gaafataa ture dha.
"Caaseffama naannoo qaamolee mootummaa sadarakaa garaagaraaf dhiyeessineerra" kan jedhan hirmaataan marichaa tokko "karaan tajaajila haqaa argachuuf gara Hawaasaatti deemnu naannoo kiilomeetira 800 ta'a.
Kana malees raawwatootni dhaabbilee mootummaa walgahiif gara Hawaasaa yeroo deeman baasii guddaa baasu" jedhan.
'Shaffatanii hidhame jechuun fudhatama hinqabu'
"Mootiin Minilik uummata Kafaa 850,000 ajjeesan. Uummatni Kafaa gama caasaa bulchiinsaatiinis sirnoota darbanitti miidhamaa turre" kan jedhan hirmaataan marichaa kan biraan "gaaffiin naannoo ta'uu gaaffii qondaaltota mootummaa qofa osoo hin taanee gaaffii uummataati" jedhan.
"Caaseffamni furtuu waan hundaa akka ta'etti hin fudhatinaa" kan jedhan ministirri mummee Abiy Ahimad naannoo yoo taane gaaffiiwwan keenya hundi ni deebi'u jettanii yaaddu taanaan sirrii miti,'' jechuun gaafi hirmaattota biraa dhiyaate deebisan.
"Akka fakkeenyaatti naannoleen Benishaangul Gumuz fi Gaambeellaa naannoo ta'anis rakkoo bu'uraalee misoomaa uummatni Kafaa gaafachaa jiru isaanillee gaafachaa jiru" jedhan.
Uummatni Kafaa mana maree fi bulchiinsa ofiitin hogganamaa akka jiru maricharratti kan himan MM Abiy Ahimad "Yeroo ammaa uummata Kafaa sabni biraa bulchaa hin jiru. Ofin of bulchaa jirtu" jechuunis dubbatan.
Haa ta'u malee gaaffiin naannoo ta'uu karaa naga qabeessa fi naannicha waliin mari'achuun dhiyaate waan mootummaa federaalaa dhiphisu akka hin taane himan.
Dhimma god-hambaa kana ministira Aadaaf Tuurizimii walin akka mari'atan kan himan MM Abiy "gaaffin keessan iddoon argama bunaa Coocee miti Kafaadha yoo ta'e dhimma kanaratti wal falmii siyaasaa fiduun hin barbaachisu" jedhan.
"Lixa Itoophiyaaf hanga misooma fidetti lachuu misoomsuun nu fayyada" jechuunis himan.
Dhimma argama bunaa ebalu jechuuf "beekumsas ta'e dandeettii hin qabu" kan jedhan MM Abiy dhimmicha hayyuuleen qorachuu danda'u jedhan.
Gaaffii bu'uraalee misoomaa
Dhimmi bu'uraalee misoomaa gaafiwwan ijoo ministira mummee Abiy Ahimadif dhiyaatan keessaati.
"Gaafiwwan bu'uraalee misoomaa kunneen akka hospitaalaa fi bishaanii gaafiicha qabannee jirra garuu amma waadaa sinif seenuu hin danda'u" jedhan.
Kutaa Lixa biyyattiitti uwwisni daandii gadi aanaa akka ta'e kan himan ministirri mummee Abiy bara kana mootummaan ijaarsa daandiif maallaqa olaanaa ramadamuusaa himan.
"Gaafiwwan bu'uraalee misoomaa kunneenis jala jalaa deebisaa deemna" jedhan.
"Yoo waliigalle Kafaa misoomsuun ulfaataa miti" kan jedhan Dr Abiy Ahimad misoomni fi badhaadhinni obsa fi dadhabbii barbaada jedhan.
"Uummatni Kafaa uummata uummama walin jiraachuu danda'u" jechuun irra deddeebin kan leellisan MM Abiy aadaan marii uummata Kafaas uummattoota biyyattii biroof qoodamuu kan qabu akka ta'es dubbatan.
Rakkoon hojii si'ominaan hojjechuu biyyattii keessatti bal'aa ta'uusaafi rakkoon misoomaa biyyattii keessa jiru hojjechuun qofa akka furamu himan.
MM Abiy Ahimad: Falaasama 'Ida'amuu' waggaa tokkoon duuba
MM Abiy Ahimad: 'Shaffatanii hidhame jechuun fudhatama hinqabu'
2 Hagayya 2019